Izixhobo zolutsha-Isiseko soMvuzo, uthando, isondo kunye ne-Intanethi
Ikhaya Ngawe Izixhobo zolutsha
Ewe kuyindalo ngokupheleleyo ukuba ulutsha lube nomdla malunga nesini, ngakumbi ngexesha nasemva kokufikisa, kodwa uhlobo lwesini olubonakala kumanyala akwi-Intanethi aluzange lukuncede ekufumaneni isazisi sakho sokwabelana ngesondo okanye ufunde malunga nothando lwezesondo. Endaweni yoko injongo yayo kukuvuselela iimvakalelo ezinamandla kuwe kangangokuba ufuna ukubuyela umva ngakumbi.
Imifanekiso engamanyala kwi-Intanethi lushishino lokuthengisa oluxabisa amawaka ezigidi zeeponti. Kukho ukuthengisa intengiso kunye nokuqokelela ulwazi ngawe malunga nokuba ungathengisela ezinye iinkampani inzuzo. Akukho nto injalo njengebhusayithi yasimahla ye-porn. Kukho imingcipheko kwimpilo yakho yengqondo neyomzimba, ukukhula kobudlelwane, ukufikelela esikolweni kunye nokuthatha inxaxheba kukwaphula umthetho.
Isizathu sokuba izinto zokwabelana ngesondo zithintelwe kubantwana, nabani na ongaphantsi kweminyaka eli-18 ubudala, ayisiyi konakalisa ulonwabo lwakho, kodwa kukukhusela ingqondo yakho ngexesha elibalulekileyo lokukhula kwakho ngokwesondo. Ngenxa yokuba ufikelela ngokulula kwimifanekiso engamanyala kwi-intanethi, oko akuthethi ukuba akunabungozi okanye kuluncedo.
Kunjani ukuba ngomnye wolutsha oluninzi oluxhomekeke kwi-porn? Ubaleka njani kwi-porn? Nazi ezinye iingcebiso zokufumana iziyobisi uGabe Deem noJace Downey.
UGabe Deem uthetha ngokusebenzisa kwakhe iphonografi kunye nendlela awayifumana ngayo ukuba wayenengxaki ngayo (1.06)
UGabe usithatha ngebali lakhe lokufumana kwakhona (1.15)
UJace downey kwincoko noMary Sharpe. Uhambo lukaJace ukuya kumlutha we-porn kunye nokwanda (2.02)
Iziphumo zengqondo zoononophala
The Iziphumo zengqondo zoononografi zibaluleke kakhulu xa ukwishumi elivisayo. Banokukuchaphazela kwiminyaka ezayo. Namhlanje lolona suku lubalaseleyo lokufunda ngakumbi kwaye uqale uhambo lokuphucula ubomi bakho ngaphandle kwe-porn!